Truck truck diesel air filter filter AF25444 AF25031 manufacturers and suppliers | UHertz
Ifowuni: 0086-18259005648 / 86-591-83568232
Icebo lokucoca ulwelo ngamanzi
Truck truck diesel filter air AF25444 AF25031
FLEETGUARD LF3524 Ioyile / iLube ...
Umgangatho we-OEM weFLEETGUARD LF3 ...
SAKURA C-1305 Lube lokucoca ulwelo C ...
Spin-on iLube lokucoca ulwelo Cartrid ...
• Isikhuselo kunye nesitshixo sisebenzisa uLogo wethu osetyenziselwa ukuthengisa phesheya.Sikholelwa ukuba umgangatho bubomi beshishini elinye kwaye inkonzo idala ikamva. Wamkelekile abathengi kwihlabathi liphela ukuba banxibelelane nathi.
Inombolo ye-OEM TA6023A
Buyisela I-Fleetguard: AF25444 AF25031I-Sakura: A-7939Esekude: FK-4024Imvulo: MB-K826AHeson: HA6634AHOKUETSU KOGYO: 32143-07800KOMATSU: 600-181-9460 600-181-9470
Ukusetyenziswa Komatsu: PC60-3 PC60-5 PC100-5 PC100-6 PC120-5 PC120-6 PC130 Caterpilalr: E312Doosan: DH250
Ububanzi Ukuphakama kukonke: 315mmEnd 1 OD: 155mmEnd 2 OD: 191mmEnd 1 ID: 88mmEnd 2 ID: 17mm
Inkcazo Isihluzi somoya
Mack ye Itraki, itrektara, itreyila, umatshini wokumba, imoto
Ubungakanani Umgangatho we-OEM
Iimbonakalo Ukususa uthuli kunye namanye amasuntswana enjini
Izinto eziPhakathi Iphepha lokucoca ulwelo laseMelika / Yenza ngokwezifiso
Izinto zePhepha Ingeniswe ivela eKorea, eJamani njl.
Ukucocwa kokusebenza kakuhle > 99.7%
Isiqinisekiso I-5000-10000 yeemayile
Imveliso yoNyaka 36000pcs ngonyaka
Ukupakisha 1. wena
2. ukupakisha cala
Ixesha lokuzisa Iintsuku 15-25
1. Ngaba uyinkampani yorhwebo okanye umenzi?
Umenzi nge mveliso.
2. Ngaba uyayamkela inkonzo ye-OEM?
Ewe, sinako ukuvelisa ngokwemfuneko yakho.
3. Athini amaxabiso akho?
4. Ngaba unayo ubuncinci beodolo?
Ewe sifuna zonke iiodolo zamanye amazwe ukuba zibe nobungakanani be-odolo encinci eqhubekayo. Ukuba ujonga ukuthengisa kodwa ngamanani amancinci kakhulu, sicebisa ukuba ujonge iwebhusayithi yethu.
5. Ngaba unokunikezela ngamaxwebhu afanelekileyo?
6. Lithini ixesha eliphakathi lokuhola?
Iisampulu, ixesha phambili malunga neentsuku ezisi-7. Kuba imveliso mass, ixesha phambili iintsuku ezingama-20-30 emva kokufumana intlawulo yedipozithi. Amaxesha akhokelayo ayasebenza xa
1) siyifumene idiphozithi yakho, kwaye
2) sinemvume yakho yokugqibela kwiimveliso zakho. Ukuba amaxesha ethu akhokelayo awasebenzi nomhla wakho wokugqibela, nceda uye kwiimfuno zakho ngentengiso yakho. Kuzo zonke iimeko siya kuzama ukulungiselela iimfuno zakho. Kwiimeko ezininzi siyakwazi ukwenza njalo.
7. Zeziphi iindlela zokuhlawula ozamkelayo?
8. Yintoni iwaranti yemveliso?
Siqinisekisa izinto zethu kunye nomsebenzi. Ukuzinikela kwethu kukoneliseka kwiimveliso zethu. Kwiwaranti okanye hayi, yinkcubeko yenkampani yethu ukujongana nokusombulula yonke imiba yabathengi ukoneliseka ngumntu wonke.
9. Uyakuqinisekisa ukuziswa okukhuselekileyo nokukhuselekileyo kweemveliso?
10. Njani malunga nemirhumo yokuthumela?
Ukuba awuqinisekanga ngesihluzi esifunekayo ngokuchanekileyo, nceda ucebise indawo esebenza ngayo kunye nokusetyenziswa.Sikunceda ukhethe isihluzi esithile esifanelekileyo.
Iimveliso zethu zisetyenziswa ikakhulu koomatshini bokwakha, ubuchwephese bezolimo, iilori zeheacy, iibhasi, izixhobo zomoya, idizili kunye nezixhobo zemigodi.
Egqithileyo Heavy truck Hino umoya lokucoca ulwelo AF25450
Okulandelayo: Spin-on Lube filter Cartridge for CATERPILLAR injini yedizili
Isixhobo sokucoca umoya
Icebo lokucoca ulwelo lomoya ngokuzenzekelayo
Uhlobo olomileyo lokucoca ulwelo lomoya
Amacebo okucoca omoya
Icebo lokucoca ulwelo ezimbini-Stage
AF4838 Hepa Iinkuphelostencils Air lokucoca ulwelo